Saxaabigii maydkiisii malaa’igtu dhaqda!! Gaaldiid Page 46760552713
Saxaabigii maydkiisii malaa’igtu dhaqda!!
Bogga Hore > Xogta > Saxaabigii maydkiisii malaa’igtu dhaqda!!
Saxaabigii Malaa’igtu ay dhaqday.
Dagaalkii Uxud markuu dhamaaday ayaa Nabigu (N.N.K.H) wuxuu baadi goobay saxaabadiisii ku geeriyootay dagaalkaas iyo kuwii ku dhaawacmay, kadibna waxa la helay saxaabiga Xamse ibnu Cabdulmudalib, Muscab ibnu Cumayr, Anas ibnu Nadri, Sacad ibnu Rabiic iyo Xandala ibnu Abucaamir oo ku shahiiday dagaalkan, kadibna Nabigu wuxuu dhahay: Ilaahayoow, kuwan anigaa marag u ah maalinta qayaame. Saxaabada shahiiday waxa kamid ahaa saxaabiga Xandala ibnu Abucaamir oo reer Aws ahaa.